စာဖတ်ကြပါ………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စာဖတ်ကြပါ……….
Posted by Wai Yan Lay on May 30, 2011 in Copy/Paste | 14 comments
ကျွန်တော် အခုတလော ဖတ်ဖြစ်နေတဲ့ ဆရာမောင်သာချို စာအုပ်တွေက လူမှုဘဝ တွေမှာရှိတဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်ကို ထင်ဟပ်စေတယ်…. တခါတခါ တချို့သောလူတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တွေ၊ စိတ်ကျင်းကျပ်စရာတွေ ကြုံဘူးကြမှာပါ…. ဒါဆို ကိုယ်ကြောင့်ရော……. ဘယ်သူတွေရဲ့ လွပ်လပ်ခွင့်၊ စိတ်အကျင်းအကျပ်ကို ဖြစ်စေခဲ့ ပြီလဲလို့ …..တွေးရင်းပေါ့…… ဆရာစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးလူတချို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေကိုသိခွင့်ရခဲတယ်လေ…. ဒါကြော့င်ဆရာမောင်သာချို စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျာ…………….
ကျွန်တော် က တော့ အခုလောလောဆယ် ” ဆရာ ဂျက်(ကွမ်းခြံကုန်း) ” ရဲ့ ” သပွတ်အူ ကျေးရွာ မှ မမြင်ရသော ကံတရားများ ” စာအုပ် ကို ဖတ်နေတယ် ။ ပြီးရင် မောင်ကောင်းထိုက် နှီးပဒေါ ရဲ့ ဟာသပဒေသာ အမှတ် ၁၆ ကို ဖတ်မယ် ။
ဟုတ်ပ အခုခေတ်ကလေးတွေ စာကိုမဖတ်ကြတော့ဘူးဗျာ..
ဘာတွေများ လုပ်နေကြပါလိမ့်.. မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကျတော့ တော်တော် အားသန်ကြတယ်.
စာအုပ်ဖတ်တာ ပညာဗဟုသုတနဲ. စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရတယ်…. ဖတ်ကြပါ…
အဲလိုတော့လည်း ပြောလို့မရဘူး။ ဖေမြင့်ရဲ့စာအုပ်တွေမှ ဖတ်တဲ့ကလေးတွေရှိသေးတယ်။ (ကိုယ်တွေ့) သူတို့ခေတ်မှာ အင်တာနက်ကနေ pshchology အကြောင်းတွေ ဖတ်ပြီး ဗဟုသုတ ပြည့်စုံတဲ့ ကလေးတွေလည်း ရှိတယ်။ တစ်ခါတလေ သူတို့ဆီက ပြန်လေ့လာရတယ်။
စာဖတ်ချင်တဲ့လူတွေ ၀ိဥာဉ်သစ်တို့ … book hives တို့မှာ စာအုပ်တွေ အများကြီးပဲ… ။
စာအုပ်တွေတော့ ဖတ်ကြည့်ချင်ပါတယ။ စာအုပ်ဖိုးမတတ်နိုင်လို့ပါရှင်။ ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတစ်ပါးကို ပြောတော့မယ်ဆိုရင် သူ့နေရာမှာ ငါသာဆိုရင်အတွေး တွေးကြည့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ကြောင့်စိတ်ကျဉ်းကြပ်မှုရှိမရှိကိုလည်း ဆန်းစစ်လေ့တော့ရှိပါတယ်။ သူများကြောင့်တော့ စိတ်ကျဉ်းကြပ်မှု ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ။
ခုလောလောဆယ်တော့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ ရင်နင့်အောင်မွှေး စာအုပ်နှင့် ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဝတ္တုတိုများ စာအုပ်ဖတ်နေပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ သုံးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကတဲ့ စာအုပ်ကို ကြာကြာမဖတ်ချင်ဘူးတဲ့ … ပြောတာကြားဖူးတာပဲ
မြန်မာဝတ္တုကောင်းကောင်းကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေက တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ ၀တ္ထုကို လက်မလွတ်သင့်ပါဘူး။ ဂျူး ၀တ္ထုတွေလည်း တော်တော် ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ မှော်ဘီဆရာသိန်းရေးတဲ့ အရှေ့ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ ဆိုတဲ့ ကိုလိုနီခေတ် နောက်ခံ ၀တ္ထုရှည် ပါပဲ။
ဆရာမကြီးမြသန်းတင့်ရဲ့… ဒါးတောင်း၍မိမိလည်ပင်းကိုဖြတ်မည် ၀တ္တုရော..မကြိုက်ဘူးလား..။
သိန်းဖေမြင့်ရဲ့.. ပစပ်ရာဇ၀င်ရော… ကြိုက်မှာပေါ့..။
ဦးတရုတ်ရေးတဲ့ ဖန်နန်းရာဇဝင် သိုင်းစာအုပ်ကတော့ လက်ကမချနိုင်အောင်ပဲဗျို့….
ဟာဗျာ ပေါက် ကရတွေရှောက် ပြောနေကြတယ် အဟုတ်မှတ်လို.
တစ် ကယ်တော့ စာရေးဆရာ အောက်လင်းဆိုလား သူရေးတဲ. အရိုင်းစံပယ် ဆိုတဲ့
စီးပွားဖြစ် ပန်းစိုက်ပျိုးနည်း စာအုပ် ကမှ လူငယ်တွေ အတွက် အကျိုးရှိတာ။
ရှိသေးတယ် ကျီးသဲလေးထပ် ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ. စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်းဆိုတာ တီဗွီ၊ရေခဲသေတ္တာ၊အဲကွန်းပြင်နည်း တွေ နိုင်ငံခြားသွားမယ်.သူတွေ အတွက်လက်စွဲ၊ ပြီးတော.ဆရာကြီး ဦးသန်းမြင့်အောင် နဲ.ဆရာမကြီး ဒေါ်နန္ဒာသိန်းဇံ တ်ို့ရဲ့စာအုပ်တွေ လည်း ဇောင်းပေးဖတ်။
ဦးနုရဲ့ ကျေးဇူးရှင်, ငရဲဆိုချိုနဲ့ လား ,ကာမတဏှာ အဲစာအုပ်တွေလဲအရမ်းကောင်းတယ် မမလေးရေကွန်ပျူတာနဲ့ စာဖတ်တာရယ်စာအုပ်ကိုဖတ်တာရယ်အရသာချင်းကွာတယ် စာအုပ်ကိုဖတ်တာပိုပြီးအရသာရှိပါတယ် (အကြိုက်ချင်းတော့တူချင်မှတူကြမှာပေါ့နော်)
(ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ မှော်ဘီဆရာသိန်းရေးတဲ့ အရှေ့ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ ဆိုတဲ့ ကိုလိုနီခေတ် နောက်ခံ ၀တ္ထုရှည် ပါပဲ။)
မှော်ဘီဆရာသိန်းကြီးက အရုးလွယ်အိတ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ရေးသူပါ။
သိန်းဖေမြင့်က တက်ခေတ်နတ်ဆိုး တက်ဘုန်းကြီး အရှေ့ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ ရေးသူပါ။